U-Edson Glauber -Ukuxhoma ngentambo-ukubala usiya eBukumkanini
INenekazi lethu leNenekazi leRosary kunye neloXolo ukuze	Edson Glauber e Manaus, Brazil:
Agasti 23, 2020:
Bantwanana bam, phulaphulani ubizo lwam. Phila imiyalezo endikunika yona ngothando olungaka. Ndithethelele oonyana bam abangababingeleli. Usathana ufuna ukubathulisa abaPhathiswa bakaThixo ukuze bangasathethi ngamazwi obomi obungenasiphelo boNyana wam waphezulu. Ngenelela. Thandaza, khawuleza, uguquke kubabingeleli, ukuze babe namandla ukuze babe nesibindi sokuyimela inyaniso, nembeko nozuko lukaThixo ngala maxesha anzima. Khusela abefundisi uthando lwakho kunye nemithandazweni yakho, kuba kwezi ntsuku uza kubona indlela umtyholi ababathile ngayo ababingeleli, i-Ekaristi kunye neCawa eNgcwele kunanini na ngaphambili. Uyakwenza ngentiyo yakhe, kwaye uya kuthatha imfazwe kunye naye ngomlo nothando. Yamkela intsikelelo yam kunye nobungakanani bam. NjengoMama wakho kunye noKumkanikazi, ndinisikelela ngegama likaYise, lo Nyana noMoya oyiNgcwele. Amen!
Agasti 22, 2020:
Bantwana bam, mna, uMama wakho, ndinithanda kakhulu kwaye ndivela eZulwini ukunibizela kuThixo. Wamkele umnxeba weNkosi kubomi bakho ngoku, njengoko ixesha lokuguqulwa lijinga ngentambo. Ihlabathi liya kugungqiswa kunanini na ngaphambili kwimbali yoluntu; iinkwenkwezi ziya kuwa esibhakabhakeni kwaye namandla amazulu aya kushukunyiswa (Mt 24: 29).cf. Xa iinkwenkwezi ziwayo NguMark Mallett Ndiyanilumkisa ngokulungileyo, bantwana bam abaziintanda; Ndenza izibongozo zam zobufazi kuwe ngenxa yolonwabo lwakho lwanaphakade ngoThixo, ukuze uguquke ikhondo lobomi bakho kunye neentliziyo zakho, kuthando Lakhe lobuthixo, ukuze ulungele ubabalo lwaKho nokuxolelwa.
Njengoko besenditshilo ngaphambili, abaninzi ababoni nto, ngamehlo evulekileyo: baninzi abaziimfama kwimisebenzi yezulu, balahlekiswa ziinkohliso zehlabathi, iinkanuko kunye nokulukuhlwa. Ukuwohloka komntu kufikelele kugqithiso, ngokuziphatha nangokomoya, kwaye akukho mininzi imiphefumlo eyintombi ehlabathini. Uninzi lwalemiphefumlo lonakaliswe ngokupheleleyo nguSathana ngenxa yesono. Thandaza kakhulu, njengoko imiphefumlo emininzi isengozini yokuzigweba ngonaphakade. Uninzi linyathelo elinye kude ekuweleni emlilweni wesihogo, kwaye isihogo, bantwana bam, sikanaphakade. Sukuvumela abalandeli bakaSathana, abantu abakhohlakeleyo abangamaMasonic nabasathana, ukuba batofa kuwe "ityhefu ebulalayo" kuwe. Ungazikhohlisi ngobuxoki bakhe, ngenzululwazi yakhe engendawo ngaphandle koThixo, kuba abaninzi bayigxothile iNkosi ezintliziyweni zabo kwaye abasasebenzi ngokulungiselela imiphefumlo, kodwa ngenjongo yokubatshabalalisa nokubalawula ngenxa yamandla nemali. Iintliziyo ezininzi azisekho eNkosini kodwa zinikezelwe kuSathana, kuba baninzi abathengise imiphefumlo yabo kuye ngenxa yokukhohlisa kunye nobukhazikhazi bobukumkani behlabathi.
Pray, thandaza, thandaza kwaye iNkosi iya kuhlala ikukhusela kwaye iya kuba ecaleni kwakho, ikusikelele. Ndinisikelela nonke, egameni loYise, lo Nyana noMoya oyiNgcwele. Amen!
Agasti 21, 2020:
Nyana wam, zange ngoku uNyana wam oyiNgcwele acaphuke kwaye akhubeke kwiSakramente ye-Ekaristi. Unyana wam yiMvana kaThixo, ethwala isuse isono sehlabathi. Nabani na ongasondeli kuye okanye uMamkele ngokholo, ngothando, nangomoya wenguquko kunye nembuyekezo, akazukufumana ubomi obungunaphakade. Thembeka kwiimfundiso zaKhe zobungcwele obunje, “kwidiphozithi yokholo,” "Abapostile banike" idiphozithi engcwele "yokholo (i idiphozi fidei, eziqulathwe kwiZibhalo eziNgcwele nakwiNkcubeko, kwiCawe iphela. “Ngokubambelela [kweli lifa] bonke abantu abangcwele, bemanyene nabefundisi balo, bahlala bethembekile kwimfundiso yabapostile, kubuzalwana, ekuqhekezeni isonka nasemithandazweni. Ke, kugcinwa, kuqheliselwa kwaye kusenziwa ukholo olwenziweyo, kufanele kubekho imvisiswano phakathi koobhishophu nabathembekileyo. ” -Katekisiki yeCawa yamaKatolika, n. I-84 wabonakaliswa kwakudala ngokushumayela kwabaPostile ngesenzo soMoya oyiNgcwele. Ayikho enye inyani, akukho lunye ukholo, akukho thixo wumbi, azikho iicawa ezininzi, kodwa inye kuphela ekhokelela elusindisweni, kwaye yiCawa yamaKatolika.
Ngamana amazwi am njengoMama angamkelwa ngumntu ngamnye wabantwana bam kwaye ahlale ngokwenene ezintliziyweni zabo.
Thandaza, thandaza, nyana wam, kuba ixesha leziganeko ezikhulu lisondela kunangaphambili, kwaye nangoku, ezininzi azilungiswa. Ke ndiyalila ndiyabandezeleka ngenxa yabo bonke abantwana bam abangafunanga ukundiva. Ndiyakusikelela kunye nabo bonke abantu, egameni loYise, lo Nyana noMoya oyiNgcwele. Amen!
Agasti 20, 2020:
Bantwana bam, kudala ndinibizela kuThixo, kodwa uninzi lwenu andimameli kwaye anizamkeli izibongozo zam ezintliziyweni zenu. Sele ndosula iinyembezi ezininzi kwaye ndibonisa oku ngokubonakalayo kwiindawo ezininzi zehlabathi, kwaye nangoku uninzi lwabantwana bam luseneentliziyo ezilukhuni nezivaliweyo, ezingabinamdla kwintlungu yam. Ndithetha nawe kwaye uyisithulu kwilizwi lam. Ndikusikelele ngothando oluninzi, kwaye kaninzi, uyandicekisa intsikelelo yam yokuba ngumama, ukona nokona unyana wam oyiNgcwele ngezono zakho ezimbi kunye nokona. Buya, ubuyele eNkosini.
UBawo ongunaPhakade unomsindo kwaye uyacaphuka ngenxa yolu buntu lungenambulelo nolusisithulu. Sele ingalo yakhe iphakanyisiwe, ekulungele ukukohlwaya ukuba uhlala ungathobeli kwaye uvukele kwiifowuni zakhe azenza ngam. UBawo, uNyana noMoya oyiNgcwele bandithumile bevela ezulwini ukuza kukubonelela ngothando, ukukhuselwa kunye nobabalo. Guqukani, bantwana bam, guqukani ngokukhawuleza, kuba isohlwayo esiKhulu sikaThixo siza kuba nomlilo-umlilo owoyikekayo wobulungisa bukaThixo-kwaye imiphefumlo emininzi isengozini yokulahleka ngonaphakade, kuba ziimfama, zizithulu kwaye zifile ngokomoya kwityhefu ebulalayo kaSathana, oye wabatshabalalisa ngobuxoki bakhe obuninzi kunye neempazamo zikaSathana.
Thandaza kakhulu kwiRosari eNgcwele kunye nemihla ngemihla, kwaye uThixo uya kuba nemfesane kuye ngamnye kuni nakwiintsapho. Umthandazo, owenziwe ngothando kunye nentliziyo, unamandla kunye nesisa sikaThixo sokutshabalalisa amandla esihogo. Thandaza, thandaza, thandaza kwaye konke ukugula ngokwasemzimbeni nangokomoya kuya kugxothwa kuwe kunye neentsapho zakho. Ndiyakuthanda kwaye ndinisikelele, egameni loYise, lo Nyana noMoya oyiNgcwele. Amen!
cf. Xa iinkwenkwezi ziwayo NguMark Mallett
"Abapostile banike" idiphozithi engcwele "yokholo (i idiphozi fidei, eziqulathwe kwiZibhalo eziNgcwele nakwiNkcubeko, kwiCawe iphela. “Ngokubambelela [kweli lifa] bonke abantu abangcwele, bemanyene nabefundisi balo, bahlala bethembekile kwimfundiso yabapostile, kubuzalwana, ekuqhekezeni isonka nasemithandazweni. Ke, kugcinwa, kuqheliselwa kwaye kusenziwa ukholo olwenziweyo, kufanele kubekho imvisiswano phakathi koobhishophu nabathembekileyo. ” -Katekisiki yeCawa yamaKatolika, n. I-84
exhonyiweyo Edson noMaria, imiyalezo, Iintlungu zabasebenzi.
← Ukusondela kuYesu
Pedro Regis - Uwexuko Uza →